Puntland oo u dabaal-dagtay 12-ka April, maalinta Xoogga Dalka Soomaaliya. – Radio Daljir
Garoowe, April 12 – Waxa maanta Garoowe si wayn loogu xusay maalinta Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS). Munaasabaddan oo ku beegan sannadguuradii 51-aad ee asaaska XDS (12-kii April, 1960) ayaa ka dhacday xarunta taliska guud ee 54-aad ee ciidamada daraawiishta Puntland.
Munaasabadda ayaa waxa ka soo qayb-galay madax iyo saraakiil sar-sare oo ka socta dawladda Puntland iyo talisyada qaybaha kala duwan ee ciidamada, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen madaxwayne ku-xigeenka Puntland jeneraal Cabdisamad Cali Shire iyo taliyaha guud ee ciidamada daraawiiwshta Puntland Jeneraal Siciid Maxamed Xirsi ‘Siciid Dheere’. Sidoo kale waxa munaasabadda joogay qunsulka guud ee dawladda Itoobiya u fadhiya Puntland iyo marti sharaf kale.
Jeneraal Siciid Maxamed Xirsi (Siciid dheere) khudbad uu jeediyey wuxuu ku xusay taariikhda iyo qiimaha ay maalintani ugu fadhido xoogga dalka Somaliyeed iyo guud ahaanba ummadda Sooomaliyeed meel kasta oo ay joogaan. Sidookale Siciid Dheere waxa uu ku dheeraadey qaabkii loo aasaasey ciidamada daraawiishta Puntland kuwaas oo uu kutilmaamey iney guteen shaqooyin badan oo loo xilsaarey.
Madaxweyne Ku-xigeenka Puntland, ahna sii hayaha xilka madaxwaynenimo Jeneraal Cabdisamad Cali Shire oo gabagabadii munaasabaddaas khudbad dheer kasoo jeediyey ayaa ku dheeraadey taariikhda ciimadii XDS kuwaas oo uu sheegey iney ahaayeen cududdii dalka Soomaaliya islamarkaana ay mudantahay in laxuso maalintii la aasaasey. Jeneraal Cabdisamad wuxuu ka hadley kaalinta ay ku fadhiyaan ciidamada daraawiishta Puntland oo uu ku ammaaney sidey ugu taaganyihiin difaacidda dhulka Puntland oo marar badan lagusoo duuley hase ahaatee ay ka guuleysteen cadawga.
Munaasabadda 51-aad ee ka soo wareegtay asaaskii ciidankii XDS ayaa ku soo beegmaysa iyada oo wali dalka Soomaaliya uu dhex jibaaxayo in kabadan 20 sano oo dagaal sokeeye ah isla markaana ayanba jirin ama aad u burbursan yihiin qaybihii kala duwanaa ee ciidamada dhinac kasta oo laga eego.